पुरुषले यस्ता चार कुराहरु गोप्य राखेकै राम्रो ! —
आज देशभर ७३६८ जनामा कोरोना संक्रमण, १४५ जनाको नि’धन
ओठमा चुरोट च्यापेर हातमा स्यानिटाइजर लगाउँदा वि’स्फोट भयो कार
आज ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
१८ हजार अक्सिजन सिलिण्डर तातोपानीमा नाकामा आइपुग्यो
२१ पुष २०७७, मंगलवार ११:३८ admin	0 Comments
एजेन्सी । आचार्य चाणक्य राजनीति र कूटनीतिका ज्ञाता थिए । उनले अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका छन् । अर्थशास्त्र मौर्यकालीन समाजको दर्पण मानिन्छ । मुद्राराक्षसको अनुसार चाणक्यको वास्तविक नाम विष्णुगुप्त थियो। विष्णुपुराण, भागवत आदि पुराणहरू तथा कथासरित्सागर आदि संस्कृत ग्रन्थहरूमा त चाणक्यको नाम आएकै छ सँगै बौद्ध ग्रन्थहरूमा समेत चाणक्यको कथा भेटिने गरेको छ ।
बुद्धघोषद्वारा बनाइएको विनयपिटकको टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंशको टीकामा चाणक्यको वृत्तान्त दिइएको छ।आचार्य चाणक्य केवल राजनीतिकका मात्र होइनन्, जीवन दर्शनका पनि ज्ञाता थिए । उनले जीवनमा जो अनुभव प्राप्त गरे, जुन नियम बनाए त्यसलाई दिएर इतिहासमा अमर भए । यहाँ हामीले उनै चाणक्यले पुरुषले सधैं गोप्य राख्नुपर्ने कुराको जानकारी राखेका छौं ।
धनको क्षतिः चाणक्य भन्छन–धनको क्षति भयो भने त्यसको बारेमा कसैलाई पनि भन्नु हुँदैंन । यसको कारण मानिसको प्रतिष्ठा नष्ट हुन्छ र मानिसहरुको उसको सम्मान गर्न छाड्छन । मानिसहरु उसलाई मद्धत गर्नुको साटो उसको अवस्थालाई हाँसोको विषय बनाउँदछन् ।
दुःखः आचार्य चाणक्यकाअनुसार यदि मनमा केही दुःख छ भने त्यो पनि कसैसँग अभिब्यक्त गर्नु हुँदैंन । किनभने संसारमा सच्चा हितैषी एकदमैं कम हुन्छन् । हुन सक्छ जुन मानिससँग दुःख अभिब्यक्त गरिन्छ उसैले पिठ्युपछि यसको मजाक उडाउन सक्छ ।
भित्री कुराः- जसका कारण यसले झन दुःखी बनाउँछ । पुरुषले आफ्नो घरको भित्री कुरा कसैलाई पनि बताउनु हुन्न । विशेष गरी आफ्नी पत्नीको चरित्रका विषयमा अर्कोसँग कुनै पनि टिप्पणी गर्नु हुँदैंन । यसो गर्नालले पुरुषको प्रतिष्ठा र सम्मानको नाश हुन्छ । भविष्यमा उसले विभिन्न समस्याहरु सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अपमानको चर्चाः भनिन्छ–ज्ञानी त्यही हो जो मान तथा अपमानलाई सदैव समान रुपमा लिन्छ । तर, यस्तै गर्न सक्नु एकदमै कठिन मानिन्छ । आचार्य चाणक्यको भनाइ छ–जीवनमा मिलेको अपमानलाई कहिल्यै पनि अरुको सामुन्ने चर्चाको विषय बनाउनु हुँदैंन । हुन सक्छ तपाई अरुलाई भनेर मनको भावना पोख्न चाहनुहुन्छ परन्तु सुन्ने मानिसले यो कुरा दोस्रो मानिसलाई बतायो भने अपमान झन वृद्धि हुन्छ । यसकारण अपमानसँग जोडिएका घटना कहिल्यै कसैसँग पनि बताउनु हुँदैंन ।
← अष्ट्रेलिया उडानको लागि क्वान्टासद्वारा जुलाईको लागि टिकट बुकिङ्ग खुला, सरकारले दियो यस्तो प्रतिक्रिया
पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर अस्ट्रेलियामा एक नेपाली विद्यार्थीको मृ’त्यु →
‘अर्जुन रेड्डी’को नेपाली रिमेकका लागि १२ घण्टा पानी नखाई अडिसन दिन तयार छु : सुवेदी – तस्बिरसहित
१० फाल्गुन २०७७, सोमबार ०४:५५ admin	0
यस्ता ७ काम गर्नुहोस्, जसबाट क्षणभरमै बन्न सकिन्छ करोडपति ।
२२ चैत्र २०७७, आईतवार ०५:०९ admin	0
६ मंसिर २०७७, शनिबार ०५:४९ admin	0
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:४३ admin	0
टोकियो । जापानको होक्काइडो प्रिफेक्चरमा आइतबार ६.१ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको जापानी मौसम विज्ञान विभाग (जेएमए) ले जनाएको छ । जमिनको
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार ११:४९ admin	0
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०६:५७ admin	0
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०६:२७ admin	0
अब अस्ट्रेलियाबाट यसरी सिधै ईसेवामा पैसा पठाउन सकिने
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०४:०८ admin	0
काठमाडौं। ईसेवा मनी ट्रान्स्फर र अस्ट्रेलियाको चर्चित रेमिट्यान्स कम्पनी पेरू रेमिटबीच रेमिट्यान्स् भुक्तानी सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतासँगै अस्ट्रेलियामा
पब्जी खेल्नकै लागि अष्ट्रेलिया बाट फर्केका युगिन…
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार १०:१३ admin	0
नेपाली युवाले बनाएको यात्री मोटरसाइकल सार्बजनिक, मूल्य कति ?
११ बैशाख २०७८, शनिबार ०६:०९ admin	0
कुलमान घिसिङले चलाए नेपालमा बनेको पहिलो विद्युतीय बाइक
१० बैशाख २०७८, शुक्रबार ०७:३९ admin	0